2016 Volkswagen mhando dzichava neCarPlay | IPhone nhau
Chese chinhu chakaratidza kuve nyore kuCarPlay munzvimbo yemotokari, yaive nemvumo yemhando hombe uye nerutsigiro rwemutengi. Nekudaro, sekufamba kwenguva, mweya yakadzikira uye pakave nemakambani mazhinji ayo, kunyangwe aratidza rutsigiro rwavo rwekutanga, vakapedzisira vadzokera kumashure. Kune rimwe divi, zvinoita sekunge idzi nguva dzakasviba dzeCarPlay dzave kuda kusvika kumagumo, uye ndizvozvo Boka reVAG, kunyanya chikamu cheVolkwagen, rakafunga kuisa CarPlay mune maviri ayo mamodheru e2016.
Kudzoresa kwaToyota kutsigira CarPlay chaive chirongo chikuru chemvura inotonhorera kune avo vari muCupertino, kunyanya nekuda kwenhamba dzemotokari mumusika izvo zvaireva. Kubva ipapo chete Cadillac neHonda ndivo vakasimbisa zviri pamutemo kubatana kwavo neCarPlay kusvika nhasi, Volkswagen payakasarudzawo kuti ma skrini emota dzavo acharatidza multimedia inoshanda sisitimu yeApple mota, kunyanya mu Gorofu R uye Tiguan mamodheru kubva muna 2016 edition.
CarPlay ichauya yakanyatsobatanidzwa neMIB-II, inova Volkswagen yega multimedia system, kuti iwe ugone kuchinjika pakati pezvakasiyana software masisitimu zvinoenderana nezvaunoda, pasina kukanganwa Car Net, rinova iro basa rekushandisa iro rinokutendera kuti uwane mota kubva, kusvika pakukiya kure kwemota. Car Net inodhura mazana maviri emaeuro pagore, mwedzi mitanhatu yekutanga yekuyedza kusununguka. Nekudaro, hazvizove zvakafanira kubvumirana Car Net kushandisa Car Play uye MIB-II pamwechete, saka zororo kumushandisi wenguva yemberi.
Basic modhi inoratidzira inomira yekubata skrini uye resolution ye400 × 240 (zvakashata kwazvo zvese zvekubata uye resolution ...) uye pasina mukana wekuisa CarPlay. Iyo 6,5-inch capacitive inobata skrini ichave yekuwedzera iyo inosanganisira mukana wekutanga-kuisa CarPlay.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » 2016 Volkswagen Models Icharatidza CarPlay
Ungachinja sei bhatiri re iPhone 6